Zizwe usekhaya e-Jannozzi BnB (igumbi lokulala eliphindwe kabili) - I-Airbnb
Zizwe usekhaya e-Jannozzi BnB (igumbi lokulala eliphindwe kabili)
San Donato Milanese, Lombardia, i-Italy
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Pamela
Igumbi lokulala elizimele eliphindwe kabili elinombhede ongusayizi wendlovukazi kanye negumbi lokugezela elineshawa.
Kubanga lokuhamba ngezinyawo ukusuka e-ENI, BMW, UNIPOL naseSan Donato Hospital.
Isitobhi sebhasi esiseduze singaphandle kwesakhiwo sethu. Ungafika esiteshini sesitimela saseSan Donato ngemizuzu emi-5 ngebhasi noma imizuzu eyi-10-15 ngezinyawo. Isikhumulo sezindiza i-Linate siqhele ngamaminithi angu-15 kuphela. Ungafika ku-Duomo ngemizuzu engama-30-45.
Le ndawo inohlu oluhle lwezitolo ezinkulu kanye nezindawo zokudlela.
Uzoba nokusetshenziswa okuyimfihlo kwegumbi lokulala eliphindwe kabili (umbhede o-1 ophindwe kabili) kanye negumbi lokugezela elineshawa kanye ne-balcony. Kuzohlinzekwa ishidi elihlanzekile namathawula.
Ifulethi lisendaweni yokuhlala, eduze nezitolo, izitolo ezinkulu, i-tube station, isiteshi sesitimela kanye nezindawo zokudlela!
Siyajabula ukusiza kunoma yikuphi: sicela usazise ukuthi kanjani. Kufanele kuhlale kukhona umuntu ekhaya uma kwenzeka udinga usizo, uma kungenjalo, sizotholakala ngesevisi yemiyalezo yohlelo lokusebenza lwe-Airbnb, ucingo noma i-imeyili. Sicela, qaphela ukuthi igumbi lisefulethini elihlanganyelwe lapho sihlala khona (umbhangqwana nengane).
Siyajabula ukusiza kunoma yikuphi: sicela usazise ukuthi kanjani. Kufanele kuhlale kukhona umuntu ekhaya uma kwenzeka udinga usizo, uma kungenjalo, sizotholakala ngesevisi yemiyale…
Inombolo yepholisi: 015192-CNI-00007
Izilimi: English, Deutsch, Italiano, Português
Hlola ezinye izinketho ezise- San Donato Milanese namaphethelo